चितवन र नवलपरासीमा एसएलसीको नतिजा सुधारोन्मुख
हिमालय खबर , ३ असार २०७२, बिहीबार - चितवन । २०७१ चैत्र महिनामा भएको एसएलसी परीक्षामा चितवनको नतिजा सुधारोन्मुख देखिएको छ । ३ वर्षअघि जम्मा ४९ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकोमा यस वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत ६९.७५ रहेको जिल्ला शिक्षा कार्य ...
एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ४७.४३ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण
हिमालय खबर , ३ असार २०७२, बिहीबार - काठमाडौं । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरले वि.सं. २०७१ को प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी)को नतिजा आज दिउँसो सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाअनुसार यो वर्ष ४७.४३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका ...
कलिलैमा आमा बन्छन् मुसहर किशोरीहरु
हिमालय खबर , ३ असार २०७२, बिहीबार - चितवन । पूर्वी चितवनको रत्ननगर–१८ मालपुरमा रहेको मुसहरबस्तीकी सरिता मुसहरको गत वर्ष १५ वर्षको कलिलैमा विवाह भयो । बस्तीकै शिव मुसहरसँग उनले प्रेम विवाह गरिन् । २०७१ साल मंसिरमा आफू खुसी बिहे गरेकी ...
अधिकारी हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर
हिमालय खबर , ३ असार २०७२, बिहीबार - चितवन । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले बिहीबार फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणमा यसअघि जिल्ला अदालत चितवनले गरेको थुनछेकको आदेशलाई सदर गरेको छ । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकु ...
मलमासका कारण सुनचाँदीको व्यापार ठप्प
हिमालय खबर , ३ असार २०७२, बिहीबार - चितवन । गत बुधबारबाट मलमास अर्थात् पुरुषोत्तम महिना सुरू भएको छ । हिन्दू धर्मशास्त्रअनुसार ‘मलमास’ भनेको सामान्य महिनाभन्दा फरक अधिक महिना भएको वरिष्ठ ज्योतिष तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप् ...
चितवनमा भूकम्पपछि मुहान सुक्यो, मूल फुट्यो
हिमालय खबर , ३ असार २०७२, बिहीबार - चितवन । वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी महाभूकम्प र यसको पराकम्पनको प्रभावले धेरै क्षति पु¥याएको छ । तर, भूकम्पले कहिँभने राम्रै प्रभाव पारेको पाइयो । चैनपुर सिद्धिपुर खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतका उपभोक्ता ...
मिनिट्रकको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु
हिमालय खबर , ३ असार २०७२, बिहीबार - धादिङ । मिनिट्रकको ठक्करबाट बिहीबार दिउँसो धादिङको भुमेस्थान–६ सिम्लेस्थित पृथ्वीराजमार्गमा एक युवकको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा अर्का एक घाइते छन् । भुमेस्थान गाविसको एक्लेफाँटबाट काठमा ...
चितवनमा सर्पदंशको औषधि अभाव
हिमालय खबर , ३ असार २०७२, बिहीबार - चितवन । चितवनमा गर्मीह्वात्तै बढेपछि सर्पदंशका बिरामी पनि बढेका छन्। बिरामीको चापसँगै औषधिकोपनि चरम् अभाव भएको छ । औषधि अभावबारेभरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. माणिकलाल मानन्धरले भने, ‘अ ...
दिसा नखुल्ने समस्या भएकी बालिकाले पाइन् नयाँ जीवन
हिमालय खबर , २ असार २०७२, बुधबार - चितवन । जन्मँदैमा दिसा नहुने समस्याबाट पीडित बनेकी भरतपुर–५ बेलचोककी ६ वर्षीया वर्षा श्रेष्ठको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएको छ । कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्जमा जेठ १३ गतेदेखि भर्ना गरिएक ...
सडकपेटीबाट ७० वर्षीय वृद्धको उद्धार
हिमालय खबर , २ असार २०७२, बुधबार - हेटौँडा । मानवसेवा आश्रम आफ्नो नाम, ठेगाना बताउन नचाहने अन्दाजी ७० वर्षीय वृद्धलाई आश्रय दिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, पशुपतिनगर हेटौँडाले मानसिक र शारीरिक अवस्था कमजोर भएका वृद्धाको उद्धार गरी ...
अपराध अनुसन्धान महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई ।
हिमालय खबर , २ असार २०७२, बुधबार - हिमालय खबर, काठमाडौँ । प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सर्बेन्द्र खनाललाई दिएको छ । महाशाखाका एसएसपी पुष्कर कार्की युएन मिसनका लागि लाइबेरिया गएपछि खनाललाई महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो ...
उद्धार गरिएकी युवतीलाई ५० हजारमा बेचेको खुलासा
हिमालय खबर , २ असार २०७२, बुधबार - काठमाडौं । राजधानीमा उनको गुजारा जेनतेन चल्दै थियो । छापाखानामा पसिना बेचेको कमाइले दैनिक खर्च टर्थ्यो। जीवनयात्रा यसरी नै घस्रिँदै थियो। वैशाख १२ गते अचानक भुइँचालो आयो। भुइँचालोले राजधानी र उनको ...
ज्वाइँलाई जेल, छोरी-नातिलाई बिक्री
हिमालय खबर , २ असार २०७२, बुधबार - जनकपुरधाम । नौ महिनाकी गर्भिणी २३ वर्षीया सुशीला ठाकुर बुधबार जसोतसो हिँड्दै धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय आइपुगिन्। चिकित्सकले दुईतीन दिनमै बच्चा हुनसक्छ भने पनि घरमा आराम गर्नुको साटो चर्को घा ...
अमेरिकाको बिरोधको बाबजुत चीनले बनाइछाड्यो समुद्रमा टापु
हिमालय खबर , २ असार २०७२, बुधबार - बेइजिङ, २ असार - चीनले विवादास्पद दक्षिण चीन सागरमा टापु निर्माण पूरा भएको जानकारी दिएको छ। यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा टापु बनाउने काम रोक्नुपर्ने बताएको थियो। चिनियाँ विदेश ...
भूकम्पका कारण ८२ जना बालबालिकाले बाबुआमा गुमाए
हिमालय खबर , २ असार २०७२, बुधबार - ललितपुर । गत वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनासकारी भूकम्पका कारण ८२ जना बालबालिकाले बाबुआमा गुमाउनु परेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्ला धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काठमाडौँ, ...